September 2019 – Gandaki Chhadke Nepal
September 19, 2019 September 19, 2019 adminLeaveaComment on आन्तरिक पर्यटकका लागि ‘भ्रमण वर्ष’
पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले भ्रमण वर्षको अभियान सुरुवात गरेको छ। प्रदेश सरकारले सन् २०१९ मा प्रदेशमा बढीभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ यो वर्षलाई आन्तरिक पर्यटक भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसै अनुसार यहाँ अभियानको थालनी गरेको हो। गण्डकी प्रदेशमा आन्तरिक पर्यटकको बलियो उपस्थितिका लागि यो अभियान सुरु […]
September 19, 2019 September 19, 2019 adminLeaveaComment on ‘भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन कठिन’
हालसम्मको अबस्थामा बाह्य पर्यटकहरू नेपाल भित्र्याउन नेपाल पर्यटन बोर्डले नियमित गरिराखेको कार्यक्रम बाहेक नेपाल वायुसेवा निगमको संभावित उडानहरू प्रभावकारी रुपले अघि बढ्न नसकेको र भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउनु त परै जाओस्, देशभित्र पनि भ्रमण वर्ष सम्बन्धी कुनै गतिविधि नभएको अबस्थामा बीस लाख पर्यटक भिœयाउने महत्वपूर्ण कार्यमा तुषारापात हुन सक्ने संभावना देखिन्छ। पर्यटन […]
September 19, 2019 September 19, 2019 adminLeaveaComment on नोट हाम्रो, हात्ती कसको–कसको !
काठमाडौं : हजारको नोट अर्थात् सजिलो भाषामा– ‘हात्ती।’ तर, यसको त्यही हात्तीमाथि प्रश्न उठेको छ– के यो नेपाली नै हो त ? ‘हो’ भनेर प्रमाण दिने कोही निस्किएको छैन। बरु ‘होइन’ भनेर आधार देखाउने धेरै छन्। विवाद बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरक्षित उपाय निकालेको छ– हात्ती नै फेरिदिने। अब नेपालमै जन्मिएका जुम्ल्याहा हात्ती राम–लक्ष्मणको पोट्रेट […]
September 19, 2019 September 19, 2019 adminLeaveaComment on स्थानीय तहमा सहकारी अलपत्र
काठमाडौं : स्थानीय तहमा सहकारी अलपत्र परेका छन्। स्थानीय तहले सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाउन र नियमन गर्न नसक्दा सहकारीमा भद्रगोल भएको छ। सहकारी विभागका अनुसार देशभर करिब ३५ हजार सहकारी छन्। तीमध्ये २९ हजार स्थानीय तहमै छन्। सहकारीमार्फत सात खर्ब रकम परिचालन भएको छ। स्थानीय तहले सहकारीलाई बेवास्ता गर्दा सहकारीको रकम जोखिममा परेको सहकारीकर्मी बताउँछन्। पाँच […]
September 19, 2019 September 19, 2019 adminLeaveaComment on बैंकमा अब डिजिटल भुक्तानी
काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी गर्न सकिने प्रणाली (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट–आरटीजीएस) सञ्चालनमा ल्याएको छ। चेक वा अन्य माध्यम प्रयोग नगरी ठूलो रकम भुक्तानी गर्न सकिने यस्तो प्रणालीको उद्घाटन राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र लन्डका मेयर पिटर इस्टलिनले संयुक्त रूपमा गरेका छन्। अब बैंकले एकैपटक एउटा […]
September 19, 2019 adminLeaveaComment on नेपाली कफी कोरिया निर्यात
पाल्पा – गत आर्थिक वर्षमा पाल्पा र गुल्मीमा उत्पादित कफी कोरिया निर्यात भएको छ। कफी सहकारी संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा झण्डै एक टन कफी कोरिया निर्यात गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा पाल्पामा १६.६ टन पार्चमेन्ट र ३.३ टन ड्राइचेरी कफी उत्पादन भएको थियो। यस्तै गुल्मीमा १.५ टन पार्चमेन्ट र सात टन ड्राइचेरी उत्पादन भएको थियो। […]
September 19, 2019 September 19, 2019 adminLeaveaComment on हरियो चियाको मूल्य: सुइरोको प्रतिकिलोे १५ सय
इलाम – हरियो चियापत्तीको मूल्य कतिसम्म पर्ला ? प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, ४० रुपैयाँ, सय वा तीन सय रुपैयाँ। तर, इलाममा यस्ता पनि चिया किसान छन्, जसले हरियो चिया नै प्रतिकिलो १५ सय रुपैयाँसम्ममा बेचिरहेका छन्। हरियो चियापत्ती सामान्यतः दुई पात एक सुइरोको हुन्छ। तर, यही पत्तीको सबैभन्दा गुणस्तरीय मानिने सुइरोमात्रैको मूल्य चाहिँ उद्योगले हजारदेखि १५ […]
September 19, 2019 adminLeaveaComment on पोखराको पर्यटन: मुख्य सिजनको बुकिङ कमजोर
पोखरा – क्षमता विस्तार गरी एक सय एक कोठा बनाइएको ल्यान्डमार्क होटलको अक्टोबर र नोभेम्बरको अग्रिम बुकिङ अहिलेसम्म जम्मा २० प्रतिशत हाराहारी छ। पोहोर–परार यो बेला ती दुई महिनाको अग्रिम बुकिङ कम्तीमा ७० प्रतिशत पुगिसक्थ्यो। ७० प्रतिशतको अग्रिम बुकिङले व्यवसायी सुखद् सिजनको पखाइमा रहन्थे। अक्टोबर लागिसक्दा बुकिङ ९० प्रतिशत हाराहारीमा उक्लिन्थ्यो। त्यसले व्यवसायीलाई झनै खुसी […]